30 taona mahery izao tsy misy antontanisa mazava momba ny omby eto Madagasikara. Ny azo antoka, mihena isan-taona sy isam-paritra ny isan’ny omby. Tsy misy fepetra raisina ho fiarovana azy ireo. Vahaolana naroson’ny tantsaha sasany any amin’ny faritra Menabe ny tokony hisy fe-potoana fanakatonana ny tsenan’omby. Ny jono aza, misy fe-potoana fikatonany nefa trondro no arovana, mainka fa ny omby izay tsy miteraka afa-tsy iray.
Maro ireo vokatra tsy tafavoaka any amin’ny kaominina Antsakabary, distrikan’i Befandriana Avaratra. Miezaka anefa ireo tantsaha manatsara ny fambolena any aminy, toy ny vary, ny lavanila, saingy tsy tafavoaka ny maro amin’izany noho ny tsy fisian’ny lalana. Anaovan’ny mponina any an-toerana antso avo ny fanamboaran-dalana mampifandray ireo kaominina ao amin’ny distrika. Tsy mitaky lalana vita tsara akory izy ireo fa rehefa lalana azo hamoaham-bokatra. Efa mandray an-tanana izay tandrify azy izao ny fokonolona. Raha vita ny lalana, afaka telo na efa-taona, hitombo avo telo heny ny vokatra any an-toerana.
Hita fa mbola vitsy ny tanora malagasy mamorona asa ho an’ny tenany, antony nanentanan’ny banky BNI azy ireo, nandritra ny Fampisehoana momba ny toekarena sy ny asa, natao teny Ankatso, ny 6 sy 7 septambra teo. Tsy vitsy amin’ireo mpandraharaha teny, nilaza fa ny tolotrasa maro ankehitriny, tsy mifanaraka amin’ny fianarana nataon’ireo tanora. Betsaka mitovy koa ny sampam-pianarana ataon’ireo tanora, ohatra, eo amin’ny fitantanana. Vokatr’izany, ny mampitombo ireo tsy anasa, na zara fa miasa, manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny fianarana natao.